2 qof oo ku dhintey iska horimaad dhexmarey burcad badeed & ciidamada Denmark – SBC
2 qof oo ku dhintey iska horimaad dhexmarey burcad badeed & ciidamada Denmark
Taliska ciidamada badda Denmark ayaa shaaca ka qaaday in markab dagaal oo laga leeyahay dalkaasi uu ku lug leeyahay iska horimaad ka dhacay biyaha badda Soomaaliya kaasi oo yimid markii la isku dayey in la qabto dooni looga shakisan yahay in burcad badeeda Soomaaliyda ay u adeegsadaan afduubka maraakiibta.
Iska horimaadkaasi ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba qof oo la haystayaal ajanabi ah oo lagu haystey doonidaasi kuwaasi oo dalalka ay u dhasheen aan ilaa iyo haatan la shaacin.
Hawlgalkan ayaa waxaa fuliyey markabka dagaalka ee lagu magacaabo Absalon kaasi oo qayb ka ah hawlgalka ciidamada NATO ee xeebaha Soomaaliya ka wada la dagaalanka burcad badeeda, iyadoo la xaqiijiyey in hawlgalkaasi lagu siidaayey 16 qof oo la haystayaal ah.
“Laba la haystayaal ah ayaa ku dhaawacmey hawlgalkaasi, dhaawacoodu halis ayuu ahaa, dhakhtarka markabka saaran wuxuu isku dayey in uu badbaadiyo nolasha labada qof, balse waa lagu guuldareysay” sidaasi waxaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Denmark.
“Waxay u muuqdeen kuwa ku dhaawacmey hawlgalka, la haysatayaasha kale way bad qabaan, mana jiro wax dhimasho ama dhaawac ah oo soo gaarey burcad badeed” ayuu yiri afhayeenka ciidamada badda Mr. Kenneth Nielsen.
Nielsen wuxuu meesha ka saarey in uu ka hordhaco sheegista dhalashada labada qof ee dhintey, ka hor inta dawlada Denmark ay ku wargalinayso qoysaskooda.
Doonida ay weerareen ciidamada Denmark ayaa la sheegay in maalmihii Axadii & Isniintii uu isha ku hayey markabka Absalon, iyadoo markii maanta uu ka soo baxay xeebaha oo u dhaqaaqay dhanka badweynta lagu bilaabay in lagu rido rasaas digniin ah si loo joojiyo balse ay rasaas uga timid dhanka burcad badeeda sida uu sheegay Nielsen oo faahfaahin ka bixiyey hawlgalkaasi, isagoo xusey in baaritaan dheeraad ah lagu sameyn doono dhacdadaasi.
Kenneth Nielsen wuxuu carabka ku dhuftey in shufto badeeda Soomaalida lagu dul hayn doono markabka Absalon ilaa iyo inta dawlada Denmark ay ka go’aansanayso inay maxkamad soo taagto ama ay ku wareejiyo dal ka mid ah wadamada gobolka oo dacwad ku soo ooga.